कसरी तपाईंको खाताको दृश्यता र सम्पर्कहरू परिमार्जन गर्ने? ट्विटर ▷ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 322
ट्विटरमा तपाईले लाखौं खाताहरूबाट समाचार र सूचनाहरूको अपार स्रोत पाउनुहुनेछ, तपाईंसँग कुनै पनि समयमा तपाईंको आफ्नै सामग्री सिर्जना गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। नेटवर्कमा तपाईंको उद्देश्यहरूमा निर्भर गर्दै, तपाईंको खाता मार्केटिंग लक्ष्यहरू वा साधारण मनोरन्जनको लागि हुन सक्छ।
ट्वीटहरू, यस प्लेटफर्ममाका प्रकाशनहरू परिचित भएपछि तपाईले के चाहानुहुन्छ भन्ने कुराकानी गर्नका लागि केवल २280० वर्णहरूमा सेवा प्रदान गर्दछ। तपाईं अपरकेस र लोअरकेस अक्षरहरू, प्रतीकहरू, र इमोजिसको साथ पाठ समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, छविहरू, GIFS र भिडियोहरू। यी खाताहरू सिर्जना गरेर, तपाईं आफ्नो पोष्टको गोपनीयता निर्णय गर्नुहुन्छ।
वास्तवमा, तपाईं दृश्यता को विभिन्न स्तर संग खाताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यो दृश्यताले सम्भावितलाई संकेत गर्दछ कि तपाईंको प्रोफाइल र तपाईंको सामग्री दुबै ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छन्। खाताको दृश्यता प्रयोगकर्ताहरूका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण समस्या हो, विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो खाताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ।
दृश्यता कि ट्विटरमा छैन?
प्लेटफर्ममा तपाईको दृश्यता तपाईको खातामा वास्तवमै के सिर्जना गर्न चाहानु हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। जब तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा नयाँ प्रयोगकर्ताको रूपमा शुरू गर्नुहुन्छ र प्लेटफर्ममा तपाईंको प्रभाव बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईंले केही रणनीतिहरूको माध्यमबाट आफ्नो दृश्यता बढाउनुपर्दछ, विशेष गरी डिजिटल मार्केटि campaigns अभियानहरूमा।
कसरी तपाईको जीवनी सुधार गर्ने, कुञ्जी शब्द वा यूआरएल सम्मिलित गर्ने। रमाईलो प्रोफाइल र हेडर छविहरू अभियान वा लोगो समाप्त गर्न छविको साथ डिजाईन गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, तपाईंले आफ्नो ट्वीटहरू अप्टिमाइज गर्नुपर्छ, तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट एकीकृत गर्नुपर्नेछ, कुराकानीमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुपर्नेछ, साथै अफलाईन संचार तत्वहरू संलग्न गर्नुहोस्।
जहाँसम्म, अन्यथा र तपाईं सकेसम्म तपाईंको खाताको दृश्यता दबाउन चाहनुहुन्छ, तपाईं चरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन म तल वर्णन गर्दछु।
यसको लागि चरणहरू:
तपाइँको खाता पहुँच गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ ट्विटर.
"सेटिंग्स र गोपनीयता" मा जानुहोस्। यो सेक्सन अनुप्रयोगमा तपाईंको खाताको प्रोफाइल फोटो मार्फत वा "थप विकल्पहरू" प्रविष्ट गरेर फेला पार्न सकिन्छ।
यस विकल्प भित्र, तपाईले "गोपनीयता र सुरक्षा" प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एक चोटि लग ईन गर्नुभयो, तपाईले सेक्शन "ट्विटरमा तपाईको गतिविधि" फेला पार्नु पर्छ जुन पछि अर्को छवटा सेक्सनमा विभाजित हुनेछ, जस मध्ये अन्तिम "दृश्यता र सम्पर्कहरू" हो।
यो प्रविष्ट गर्दा, तपाईंले दुई मुख्य सेक्सनहरू फेला पार्नुहुनेछ: "दृश्यता" र "सम्पर्कहरू"।
भित्र दृश्यता देखा पर्नेछ:
तेस्रो पक्षहरूलाई तपाइँको माध्यमबाट ट्विटरमा फेला पार्न अनुमतिको संभावना इमेल
अर्कोतर्फ, तपाईसँग तेस्रो पक्षलाई तपाईको इ-मेल नम्बर मार्फत ट्विटरमा फेला पार्न अनुमति दिने सम्भावना पनि हुनेछ। टेलिफोन
दुबै विकल्पहरूसँग तपाइँको अनुमति प्रदान गर्नका लागि सम्बन्धित बाकस हुनेछ अनुरूप
भित्रका सम्पर्कहरू देखा पर्नेछन्:
सबै सम्पर्कहरू प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता जुन तपाईंले आफ्नो मोबाइल उपकरणबाट आयात गर्नुभयो। सबै सम्पर्कहरूसँग, ट्विटरले तपाईंको अनुभव प्लेटफर्ममा कन्फिगर गर्दछ, खाताहरू अनुसरण गर्नका लागि।
जब तपाईं यो विकल्प प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईं सुरूमा शीर्षमा फेला पार्नुहुनेछ “सबै सम्पर्कहरू मेट्नुहोस् ”, यदि तपाईं तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन चाहनुहुन्छ भने। यद्यपि प्रणालीले तपाईंलाई चेतावनी दिन्छ कि यस प्रक्रियाले केहि समय लिन सक्दछ।
तल तपाईंले सबै सम्पर्कहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले अपलोड गर्नुभयो सूची मोड।
1 दृश्यता कि ट्विटरमा छैन?
2 यसको लागि चरणहरू:
3 भित्र दृश्यता देखा पर्नेछ:
4 भित्रका सम्पर्कहरू देखा पर्नेछन्:
कसरी PowerPoint को लागि एक युट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्ने?